Dhagxaanta qaaliga ah: maxay yihiin, sifooyin iyo asal | Saadaasha Shabakadda
Dhagxaan qaali ah
Jarmal Portillo | 16/02/2021 12:07 | Geology
Maanta waxaynu ka hadlaynaa mid ka mid ah maaddooyinka ka soo baxa mindhicirka meeraheenna oo ay ka tirsan yihiin maaddooyinka adduunka ugu baahi badan. Waxay ku saabsan tahay dhagaxyo qaali ah. Waa qalab leh qurux xad dhaaf ah iyo macno faro badan oo faa iido weyn oo jireed iyo mid maskaxeedba loo aaneynayo sababo la xiriira caqiidooyinka iyo halyeeyada la socda dhagaxaan
Sidaa darteed, waxaan u hibeyn doonnaa qodobkaan si aan kuugu sheegno dhammaan astaamaha, asalka iyo isbarbardhiga dhagaxyada.
1 Waa maxay dhagaxaanta
2 Kala soocida dhagxaanta
3 Guryaha iyo astaamaha
Waa maxay dhagaxaanta
Midka ugu horreeya oo dhan waa in la ogaado waxa fikradda dhagxaanta loo tiirinayo. Waxay ku saabsan tahay taas macdanta, macdanta iyo macdanta dhagaxa ah ee loo isticmaalay in lagu sameeyo agabyo kala duwan oo ku jira warshadaha dahabka, farshaxanno iyo dhagax qurxin oo asalkiisu yahay qolofka dhulka. Mahadsanid dhagxaantaan waxaad sameyn kartaa siddooyin, jijimooyin, silsilado, xargaha, silsilado, iwm.
Qalabka loo tixgelinayo inuu yahay dhagax qaali ah ama nus-qaali ah, waa inuu la kulmaa astaamo iyo sifooyin gaar ah. Astaamahan oo dhan waxaan ku soo dari doonaa adkaanta, quruxda, midabka, dhalaalka, adkeysiga iyo naadirnimada. Layaab ma leh in dhif iyo naadir ay tahay dhagaxa qaaliga ahi, inbadan oo ka mid ah lacagta ay ku fadhido suuqa. Magac kale oo loo bixiyo qalabkan waa jawharad, jawharad iyo dhaldhalaal.
Waxay ka soo jeedaan dhagaxyada, macdanta, galaaska ama waxyaabaha kale ee dabiiciga ah ee la dhalaali karo ama la jari karo si loo abuuro dhar tayo sare leh. Ma dooneyno inaan soo iibsanno faraanti tayo sare leh, waxaan raadineynaa mid leh dhagaxan wanaagsan oo leh astaamo wanaagsan. Qaar ka mid ah sidoo kale waxaa loo isticmaalaa ku dayashada dhowr toddobaad tan iyo markii ay leeyihiin muuqaal la mid ah laakiin aysan lahayn isku dhammaystir iyo qurux isku mid ah.
Guud ahaan, badankood waxay u muuqdaan kuwo adag oo, in kastoo laga yaabo inay leeyihiin macdano jilicsan, waxaa la siiyaa qiime bilic leh oo quruxdooda iyo dhif ah.
Kala soocida dhagxaanta
Sida lafilayo, waxay kuxirantahay asalka iyo astaamaha, dhagaxyada qaaliga ah iyo kuwa qaaliga ah waa lakala sooci karaa. Dabcan, waxaa loo kala saaray dhagxaan dabiici ah oo macdan ah, dhagxaan dabiici ah iyo macdano. Aan aragno astaamaha midkastoo ka mid ah:
Dhagxaanta macdanta aan dabiici ahayn: dhammaantood waa kuwa loo arko inay yihiin macdan aan dabiici ahayn. Badanaa waxaa lagu gartaa inay leeyihiin qaaciddo kiimikaad qeexan iyo qaab dhismeed gaar ah oo crystalline ah. Dhagxaantaan macdanta ah ee aan dabiici ahayn waxaa lagu sameeyay dabiiciyan. Inta badan iyagu waa kuwa ugu caansan uguna badan dabeecadda. Waa mid ka mid ah sababaha ay sida caadiga ah leeyihiin xoogaa qiimo ka hooseeya oo aan sidaa loo qiimeyn.
Dhagaxaanta dabiiciga ah: waa kuwa aan loo qaadan macdan ahaan. Sababta tan ayaa ah inay ku samaysan yihiin ficil-nololeedka noole. Tusaale ahaan, waxaan leenahay dhagaxa ubaxa oo lagu sameeyo qaboojinta sanado badan oo cusbi ah geedo hore. Sidaad filan karto, dhagxaanta noocan oo kale ah ayaa aad uga qiimo badan kuwa aad u badan. Waana in kumanaan iyo kumanaan sanadood ay tahay inay u gudubto maadada si ay sidan uga samaysato. Luulku waa tusaale kale oo dhagax dabiici ah. Waxaa loo sameeyay mahadnaq ficil ahaan bayoolaji ah oysters.
Dhagaxyada 'Mineraloid': Dhammaantood waa walxahaas aan ahayn macdan maadaama aysan lahayn qaab dhismeed kristal ah ama ka kooban kiimiko si wanaagsan loo qeexay. Halkan waxaan ka helnaa koox ka mid ah opals iyo obsidians.
Guryaha iyo astaamaha
Habka ugu wanaagsan ee loo kala saaro dhagxaanta dhagxaanta oo dhan waa in lagu sameeyo midabbada, astaamaha, iyo sifooyinka ay leeyihiin. Waxaan arki doonnaa qaar ka mid ah astaamaha ka dhigaya qalabkan mid gaar ah. Waxyaabaha loo tixgelinayo dhagax qaali ah, waa inuu la kulmaa astaamo iyo sifooyin gaar ah oo ka dhigaya wax leh sifooyin u gaar ah qaab dabiici ah. Aan aragno sifooyinka iyo astaamahani waa:
Quruxda: quruxda waxaa lagu bixiyaa qaabkeeda iyo midabkeeda. Waxay sidoo kale la xiriirtaa daahfurnaanta ama dhalaalka. Si loo sameeyo dhagxaanta qaaliga ah waxay leedahay qurux sare, waxaa lagama maarmaan ah in kiimiko lagu daro. Aad ayey muhiim u tahay in la awoodo in laga dhigo mid soo jiidasho leh liiska iibsadayaasha.
Cimri dherer: cimri dhererku waa inuu ku xirnaadaa awoodda iska caabbinta in lagu xoqo mid kale ama ka soo horjeedo jug ama cadaadis kasta. Waxaad sidoo kale qaddarin kartaa iska caabinta maaddadan adoo adeegsanaya kiimikooyin kala duwan iyo isticmaalka maalinlaha ah ee ay had iyo jeer la soo gudboonaato.
Color- waxaa loo qaadan karaa inay tahay muuqaalka ugu muhiimsan ee ay tahay inaad qiimo weyn leedahay. Dhagaxyada aadka loo raadinayo waxaa ka mid ah kuwa leh cagaar, casaan iyo buluug qurux badan. Damaca ugu yar ayaa ah caddaan, hufan iyo madow. Sidoo kale waa inaan tixgeliyaa dhadhanka shaqsiyeed ee mid kasta.
Iftiimin: waxaa loola jeedaa kartida iftiiminta iftiinka wejigooda ama dusha sare. Badanaa waxay ku jiraan milicsiga, milicsiga, kala firdhinta iyo wejiga iftiinka ka imanaya deegaanka. Haddii dhagxan dhagax ay awood u leedahay inay u oggolaato iftiinka inuu dhex maro muraayadda, waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay dhagax leh tayo sare. Markuu mugdi badan yahay, ayaa ka qiimo jaban waxaana lagu iibin doonaa qiimo kayar.
Nasiib darrada waxaan u hibeyneynaa sadar ama wax intaa ka sii dheer maxaa yeelay waxay la xiriirtaa dhibaatada dhagaxa in laga helo markii loo baahdo inuu sannado badan haysto Faa’iido inoguma jirto in dhagax uu ku sareeyo dhamaan sifooyinka aan kor kusoo xusnay hadii aan la helin Gemooyinkaani badanaa waa kuwo gaar ah oo macno malahan qiimaha uu yahay, Waa inaad qiimeysaa howsha la qabtay si aad awood ugu yeelatid dhagxaantaan inay noqdaan jawharad.
Dhagaxku waa dhif iyo sida ay u adagtahay in la helo, badanaa waa qaali oo aad baa loo jecel yahay. Aadanaha wuxuu waligiis jeclaa inuu yeesho kan ugu adag. Waa mid ka mid ah sababaha dhagxaanta qaaliga ah ee adduunka loogu qaybiyo dad yar. Kaliya dadkaas ayaa awooda inay bixiyaan waxa ku kacaya.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad waxbadan kaga baran karto dhagaxaanta iyo astaamahooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Geology » Dhagxaan qaali ah